Arsenal oo Man Utd ku qabsatay saxiixa Kevin Strootman. - Caasimada Online
Home Warar Arsenal oo Man Utd ku qabsatay saxiixa Kevin Strootman.
Arsenal oo Man Utd ku qabsatay saxiixa Kevin Strootman.
Manchester United iyo Arsenal ayaa dagaal ugu jira soo xero gelinta xidiga kooxda PSV Eindhoven ee lagu qiimeeyo 17 milyan ee ginni Kevin Strootman, sida uu qoray wargeyska The Sun.
22-jirkaan qadka dhexe ee reer Holland ayaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah da’yarta qadka dhexe ugu wanaagsan ee kubada cagta dalka Netherlands wuxuuna si aad ah banaanka ugu soo baxay labadii sano ee u dambeysay.
Xidigaan ayaan wax qarsoodi ah ka dhigin dareenkiisa ku aadan inuu ka ciyaaro Horyaal ka xamaasad sareeya midka dalkiisa.
Rajadiisa ayaana ah inuu bisha soo aadan marka uu suuqu furmo uu ku biiro koox sare. AC Milan, Liverpool iyo Tottenham ayaa sidoo kale xidigaan isha ku haaya, laakiin United iyo Arsenal ayaa hugaaminaya loolanka saxiixiisa.
Wakiilka United u indha-indheeya Yurub Martin Ferguson iyo dhigiisa Arsenal Steve Rowley ayaa labadoodu xidigaan soo daawaday waxaana lagu niinasaa ‘Mark van Bommel-ka cusub’.
Ilo sare oo ka tirsan kooxda PSV ayaa daaha ka qaaday: “Ma ahan wax qarsoodi ah inuu Janaayo kooxda ka tegi doono. Su’aashu keliya waa halkee ayuu ku jeedaa?
“Waxay u egtahay inuu u socda midkood Manchester United ama Arsenal, labadooda ayaa aad isha ugu haaya.”